[लोक सम्वाद पत्रिका] प्रकोपमा पूर्वसूचनाको उपयोग र अनपेक्षित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका कार्यभार – नेपाल बाढी उत्थानशीलता पोर्टल
गृहपृष्ठ>सम्बन्धित समाचार >[लोक सम्वाद पत्रिका] प्रकोपमा पूर्वसूचनाको उपयोग र अनपेक्षित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका कार्यभार
[लोक सम्वाद पत्रिका] प्रकोपमा पूर्वसूचनाको उपयोग र अनपेक्षित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका कार्यभार
हाम्रो गाउँमा वसन्त ऋतुमा माल चरा (कर्याङकुरुङ) उत्तर लागेपछि मलखादको डिलमा, आँगनको डिलमुनि घिरौँला, चिचिन्डा, काँक्रा आदिका बिउ रोप्ने चलन थियो । यस्ता प्रचलन हाम्रो गाउँमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि हुन्थे र अहिले पनि कतैकतै जीवितै रहेको पाइन्छन् । माल चराको बाटो नपर्ने ठाउँमा अरु कुनै प्राणीले ऋतुसम्बन्धी सङ्केत दिँदा हुन् ।
चक्रवात, आँधी हुरी, अतिवृष्टि वा हिमपात असिना पानी, भूकम्प आदिका बारेमा पहिल्यै थाहा पाउने कुनै सूचक भएनन् होला । यी घटनाको कुनै सङ्केत वा सुइँको समेत नपाउँदा बनावटका कुनै उपाय गर्ने अवसर नपाएर धेरै विनाश भए होलान् । त्यसैले ‘हुने हार, दैव नटार’ भन्ने उक्ति चलेको हुनुपर्छ ।
खबर पाएपछि समयमै प्रकोपबाट जनधनको सुरक्षा गर्ने उपायहरू गरिएन भने पूर्व सूचनाको कुनै अर्थ हुँदैन । प्रकोप पूर्वसूचनाको क्रियात्मक लक्ष्य कम्तीमा पनि जोखिममा भएका मानिसहरू र सार्न सकिने सम्पत्तिलाई समयमै सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउनु हो । पूर्व सूचनाबाट अलि धेरै समय उपलब्ध भयो भने समुदायमा अन्य बनावटका काम पनि गर्न सकिन्छ ।
पछि, स्टेसनहरू स्वचालित बनाएर बाढीको तह चितवनको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पढ्न सकिने बनाइयो । यसबाट रजैयामा राप्ती र देवघाटमा नारायणी नदीमा बाढीको अवस्था के छ भन्ने तत्क्षण थाहा हुने भयो । निश्चित स्तरभन्दा ठुलो बाढी भएपछि ‘डिस्प्ले’मा साइरन बज्ने बनाइयो ता कि बाढी बढेमा दिउसो वा राति प्रशासनमा तत्कालै थाहा होस् र समुदायमा खबर गर्न सकियोस् । यसरी बाढी अनुगमन र सञ्चारमा उपलब्ध भएका आधुनिक प्रविधिहरूको मद्दतबाट बाढी पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको छ ।
पूर्वसूचनाका आधारमा बाढीको जोखिममा रहेका धेरै नदी तटका समुदायले बनावटका उपाय अपनाउने अभ्यास गरेपछि थाहै नपाई बाढी पसेर हुने जनधनको नोक्सानी उल्लेख्य रूपमा कम भएको छ । केही वर्ष यता पूर्वानुमानहरूको विश्वसनीयता बढ्दै पनि गएको छ । तथापि पूर्वानुमान शतप्रतिशत सही हुने सम्भावना कमै हुन्छ । यसर्थ, नदी किनारामा गेज गाडेर पानीको सतह नाप्ने, बाढीको स्तर अनुसार साइरन बजाउने, पहेँलो र रातो झन्डा देखाएर सूचना दिने साथै समुदायका स्वयंसेवी कार्यदलले जोखिममा रहेकाहरूलाई उद्धार गर्ने परिपाटीलाई थप सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ ।
निश्चित समयमा परेको मात्राका आधारमा जस्तै- एक, तीन, छ, बाह्र वा चौवस घण्टामा कति पानी पर्यो भन्ने हिसाबले वर्षा नापिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालमा १ घण्टामा ६० मिलिमिटर, तीन घण्टामा ८० मिलिमिटर, छ घण्टामा १०० मिलिमिटर, बाह्र घण्टामा १२० मिलिमिटर वा चौबिस घण्टामा १४० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भए पहिरो, बाढी जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भनी सँघार निर्धारण गरेको छ । यदि यी अवधिमा उल्लेखित भन्दा बढी पानी पर्यो भने बाढी पहिरो जान सक्छ भनेर सूचना गरिन्छ ।
विपद् जोखिमको ज्ञान र व्यवस्थापकीय अनुभव
विक्रम सम्वत् २०७१ मा बबई नदीमा बाढी आयो । जिल्लाका अधिकारीहरूले पहिल्यै सूचना पाउँदा पनि बेवास्ता गरेको हुँदा अनपेक्षित रूपमा बढी धनजनको क्षति भयो । अधिकारीहरूले पूर्वसूचना प्रणालीले नै काम नगरेको भनेर विभिन्न बहाना बनाउन परेको थियो । कति मात्राको वा कुन विन्दुसम्मको बाढी आफ्नो लागि सजग, चेतावनी वा खतरा हो र पूर्वसूचना पाएपछि आफूले के गर्ने भन्ने सम्बन्धित समुदाय र विपद् व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार सबै अधिकारीहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ । उनीहरूले इमानदारीपूर्वक विपद् प्रतिकार्य विधिको पालन गर्नु गराउनु पर्छ ।
अहिले समुद्रमाथि चक्रवात उत्पन्न भई कुन दिशामा बढिरहेको छ भनी तत्कालै अनुगमन गर्न सकिन्छ । त्यसले कति शक्तिशाली आँधी सिर्जना गर्न सक्छ, त्यो आँधी कुन क्षेत्रमा कहिले झर्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । भू-उपग्रह एवं दूरसंवेदन प्रविधिबाट यस्ता प्रक्रियामा हरदम निगरानी गरिन्छन् । निगरानीबाट पाएका जानकारीको विश्लेषण गरी त्यसको नतिजा तत्कालै सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन अधिकारीहरू र आम मानिसहरूलाई खबर गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब प्रकोप हुन सक्ने भेउ समयमै पाउन र प्रकोपबाट हुने विनाश कम गर्न सकिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा गरिएका अभ्यासहरूबाट पूर्वानुमानका आधारमा प्रकोप नआइपुग्दै गरिएका तयारी र बनावटका उपायहरू निकै प्रभावकारी भएका देखिएका छन् । घटनापछि गरिने उद्धार र राहतमा लाग्ने भन्दा कैयौँ गुणा कम खर्च र कम मिहिनेतमा जनधन जोगाउन सकिने उदाहरणहरू छन् । भारतको उडिसा राज्यमा विक्रम संवत् २०५६ मा ‘सुपर साइक्लोन’ नामको आँधीमा दसौँ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । विक्रम संवत् २०७१ आएको उस्तै खतरनाक हुडहुड नामको आँधीमा त्यहाँ निकै कम मानवीय क्षति (२५ जनाको मृत्यु) भयो । भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको समीक्षा अनुसार पूर्वसूचनाको आधारमा यथेष्ट तयारी गरेकाले उडीसामा मृत्यु घटाउन सकिएको थियो । नेपालमा पूर्वसूचनाको प्रभावकारी अभ्यास हुन नसकेकोले हुडहुड आँधीले अन्नपूर्ण हिमाली भेगमा ल्याएको हिमपात र पहिरोका कारण ५९ मृत्यू भएकाे , कम्तीमा ४० जना हराएका र १७५ जना घाइते भएका थिए ।
खबर पाएपछि समयमै प्रकोपबाट जनधनको सुरक्षा गर्ने उपायहरू गरिएन भने पूर्वसूचनाको कुनै अर्थ हुँदैन । प्रकोप पूर्व सूचनाको क्रियात्मक लक्ष्य कम्तीमा पनि जोखिममा भएका मानिसहरू र सार्न सकिने सम्पत्तिलाई समयमै सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउनु हो । पूर्वसूचनाबाट अलि धेरै समय उपलब्ध भयो भने समुदायमा अन्य बनावटका काम पनि गर्न सकिन्छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र समुदायका जस्तै अरु सङ्घ संस्थाका पनि आ-आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छन् । विपद् व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार निकाय र अधिकारीले प्रकोपको प्रकृति, मात्रा र सम्भावित खतराका साथै समुदायका विभिन्न पुलहहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ । जोखिममा रहेका समुदायको जिउधनको रक्षा गर्ने सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न परस्परमा समन्वय गरी विधिपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । पूर्वसूचनाको उपलब्धता र समुदायसँग मिलेर काम गरी प्रकोपबाट हुने विनाश कम गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो ।
तैपनि, हिजोआज सबैजसो निकायहरूले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट पाएका सूचना पुनःप्रशारण गर्ने गरेको पाइन्छ । विभागले उत्पादन गरी प्राप्त पूर्वसूचनालाई देउसी भैलोको तालमा दोहर्याएर विपद् व्यवस्थापनको कार्यभार पुरा हुँदैन । केवल प्रकोपको खबर पठाएर मात्र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । विपद्को जोखिममा रहेका समुदायहरूको परिस्थिति कस्तो छ ? उनीहरूलाई के सहायता चाहिएको छ ? उनीहरूले पूर्वसूचना प्रणालीको उपयोग गर्ने उपयुक्त तौर तरिका के हुन सक्छन् ? र, कसरी सफलतापूर्वक विपत्तिको सामना गर्ने ? भन्ने बुझेर पूर्व सूचनाको उपयाेग गर्न सक्नु पर्छ ।
यो लेख लोक सम्वाद पत्रिकामा श्रावण २७ गते प्रकाशित भएको थियो।